Mmiri mmiri (mmiri) mita ọkwa, mita radar dị ugbu a na mita mmiri, China Liquid (mmiri) mita ọkwa, mita radar ugbu a na ndị na-emepụta ihe na-asọ oyi, ndị na-ebubata, Ụlọ ọrụ - HNAC Technology Co., Ltd.
>lọ>Onye na-eweta ngwaahịa>Mita nha
Mmiri mmiri (mmiri) mita ọkwa, mita radar ugbu a na mita ọsọ
Mita nha gụnyere ngwaahịa atọ: mmiri (mmiri) larịị nlele, mita eruba radar na mita eruba. Ihe na-esonụ bụ mmeghe zuru ezu maka ngwaahịa ndị a:
1.Liquid (Mmiri) Ọkwa Mita: Ọ bụ ihe na-abụghị kọntaktị planar millimeter ife radar larịị nlele maka elu mmiri larịị nha, nke nakweere ugboro modulated na-aga n'ihu ife radar (FMCW) technology iji tụọ mmiri mmiri larịị. Ọ naghị emetụta ya site na gradients okpomọkụ, uzuoku mmiri dị n'elu mmiri, mmetọ na mmiri, na sediments n'oge nha; algọridim kachasị mma nwere ike ime ka nsonaazụ nha dịkwuo mma, nke nwere njirimara nke obere nha, nrụnye dị mfe, na mmezi dị ala.
2.Radar Current Mita: Ngwaahịa na-eji K band planar microstrip array antenna nke nwere ike itinye uche na ike dị ala. Ejikọtara ya na ọrụ nke nkwụghachi akụkụ kwụ ọtọ, nzacha ngwa ngwa nzacha algọridim, nchọpụta ike mgbaàmà, nkwurịta okwu RS485/RS232, nkwurịta okwu ikuku na ndị ọzọ; Nsonaazụ nke nha ọsọ adịghị emetụta ọnọdụ okpomọkụ na ikuku ikuku, na akụrụngwa adịghị emetụta nsị nsị na silt, na mmebi mmiri adịghị emetụta ya. Ọ dị mfe na iwu obodo ma dị mfe maka mmezi; Nrụpụta antenna pụrụ iche na-eme ka ike ọkụ dị oke ala, na-ebelata oke ihe ndị a chọrọ, na-eme ka ọ dị mma maka ntinye n'ebe a na-achọ nlekota ogologo oge nleba anya ọnụego.
3.Flow Mita: Ọ bụ mita na-agba ọsọ na-akpaghị aka na-adabere na nkà na ụzụ microwave, bụ nke a nakweere nkà na ụzụ radar ụgbọ elu K-band iji tụọ ọsọ ọsọ na mmiri mmiri n'ụzọ na-enweghị kọntaktị. Ọ na-agbakọ ma na-ewepụta ngwa ngwa ngwa ngwa yana chịkọbara mpụta nke ngalaba oge dị ka ụdị ngwanrọ arụnyere na algọridim siri dị. Ngwaahịa ahụ nwere njirimara nke obere ike oriri, ntụkwasị obi dị elu na nlekọta dị mfe; Usoro nha adịghị emetụta okpomọkụ, sedimenti, mmetọ mmiri, ihe na-ese n'elu mmiri na ihe ndị ọzọ.
Product Okwu Mmalite
Mpaghara ngwa maka nha mita nke mmiri mmiri (mmiri), mita eruba radar na mita eruba:
1. Mmiri mmiri (mmiri) mita ọkwa:
A. Nnyocha mmiri mmiri nke osimiri, ọdọ mmiri na ọdọ mmiri;
B. Osimiri, ọwa mmiri, njikwa ide mmiri na nlekota ọkwa mmiri ndị ọzọ;
C. Njikwa ide mmiri n'obodo ukwu, igbutu mmiri na nlekota ọkwa mmiri ndị ọzọ;
D. Nleba anya ide mmiri mmiri ozuzo na mpaghara ugwu;
2. Mita nke Rada:
A. Ịdọ aka ná ntị mbụ na nleba anya maka ọdachi ala ala;
B. Nleba anya na osimiri na akụrụngwa mmiri;
C. Nnyocha gbasara mmiri mmiri nke usoro osimiri, ọwa mmiri mmiri na njikwa ide mmiri;
D. Ihe nchekwa nchekwa gburugburu ebe obibi, nleba anya netwọkụ ọwa mmiri n'okpuru ala;
E. Ịchịkwa ide mmiri n’obodo ukwu, nleba anya ide mmiri mmiri ozuzo nke ugwu, wdg.
3. Igwe na-efe efe:
A. Nleta ọsọ ọsọ, ọkwa mmiri ma ọ bụ nrịba nke osimiri, ọdọ mmiri, tides, sluices reservoir, mwepu nke gburugburu ebe obibi, netwọk ọkpọkọ n'okpuru ala, ọwa mmiri, wdg;
B. Na-enyere aka ọrụ nhazi mmiri, dị ka inye mmiri n'obodo ukwu, nlekota nsị mmiri, wdg;
C. Mgbakọ ọsọ, nleba anya nrịbama na mpụta, wdg.
Turbine Francis kwụ ọtọ maka ọdụ ike mmiri dị ọkara na nnukwu ikike
Onye na-achịkwa ọsọ ọsọ (Gọvanọ)
Sistemụ dị ugbu a na sistemụ dị ugbu a (AC&DC Sistemụ)